विज्ञापनले जुराएको डा. जगदीश र ज्योति अग्रवालको जोडी – Health Post Nepal
विज्ञापनले जुराएको डा. जगदीश र ज्योति अग्रवालको जोडी
२०७५ भदौ ६ गते १३:५८
विराटनगर रंगेलीका जगदीशप्रसाद अग्रवाल भारतको जयपुरमा चिकित्सा शिक्षा पढ्दै थिए । पढाइ सकिनासाथ विवाह गर्ने सोच थियो उनको र परिवारको पनि । जगदीशलाई डाक्टर नै खोज्नुपर्छ भन्ने थियो, तर जात, धर्म सबै मिल्ने डाक्टर पाउन त्यति सजिलो कहाँ थियो र !
उनी सुरुदेखि नै नछुटाई पत्रिका पढ्थे । १ मे १९८८ का दिन स्थानीय राजस्थान पत्रिकाको वर्गीकृत कोलममा छापिएको एउटा विज्ञापनमा उनको आँखा पर्यो । त्यो विज्ञापन गर्ग गोत्रका डाक्टरको खोजीसम्बन्धी थियो, तर अस्पतालका लागि नभएर वरका लागि थियो । अग्रवालले विज्ञापन हेरे । गर्ग गोत्रकी अग्रवाल डाक्टर स्लिम केटीका लागि योग्य वरको खोजी गर्न दरखास्त आह्वान गरिएको थियो । त्यतिवेला डा. ज्योति भारतको उदयपुरमा डिप्लोमा इन गाइनो अब्स (डिजिओ) गर्दै थिइन् ।
त्यही विज्ञापनले बाँधेको थियो नेपालका प्रतिष्ठित फिजिसियन एवं चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का डिन जगदीशप्रसाद अग्रवाल र वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. ज्योति अग्रवाललाई ।
त्यतिवेलासम्म जगदीशको परिवारले पठाएको निवेदन ज्योतिको घर पुगिसकेको थियो । सोही विज्ञापनबाट स्थानीय अर्का हाडजोर्नी विशेषज्ञसमेत ज्योतिको हात माग्न गइसकेका रहेछन् । जगदीश १९ जुलाईमा ज्योतिको घर पुगे । १२ मेमै ती डाक्टर पुगिसकेका भए पनि उनले घर पुगेपछि दाइजोको लामो लिस्ट पठाए ।
परिवारका तर्फबाट जगदीश आफैँले दरखास्त लेखेर पठाए । उनले स्थानीय अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर साथीमार्फत उनको डिटेल मगाए । दरखास्त हालेर मात्र उनको मन अडिएर बस्न सकेन । उनी रात्रिबसमा ५ सय किलोमिटरको यात्रा तय गरेर केटी हेर्न जयपुर पुगे । उनी ज्योतिले इन्टर्नसिप गरिरहेको अस्पतालमै उनलाई हेर्न पुगे । जगदीश पुग्दा ज्योति घर हिँडिसकेकी रहिछन् । उनी खोज्दै खोज्दै ज्योतिको घर पुगे ।
त्यतिवेलासम्म जगदीशको परिवारले पठाएको निवेदन ज्योतिको घर पुगिसकेको थियो । सोही विज्ञापनबाट स्थानीय अर्का हाडजोर्नी विशेषज्ञसमेत ज्योतिको हात माग्न गइसकेका रहेछन् । जगदीश १९ जुलाईमा ज्योतिको घर पुगे । १२ मेमै ती डाक्टर पुगिसकेका भए पनि उनले घर पुगेपछि दाइजोको लामो लिस्ट पठाए । ज्योतिका बुबाआमा दुवै स्थानीय शिक्षक थिए, उनीहरुले दाइजोको माग स्विकार्न सकेनन् ।
जगदीशलाई भेटेपछि ज्योतिको परिवारले सबै कुरा चित्त बुझायो । विज्ञापनमै एउटा सर्त थियो, कुनै दाइजो नदिने । जगदीशले निवेदनमै त्यो कुरा सकारिसकेका थिए । पछि दुई परिवारबीच भेटघाट भयो र ज्योतिको परिवार नेपाल आएर विराटनगरस्थित धर्मशालाबाट २ डिसेम्बर १९९८ का दिन विवाह भयो ।
नेपाल फर्किएसँगै जगदीश सन् १९९० जनवरीदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आबद्ध भए । ज्योति सोही वर्ष जुलाईमा डिजिओ सिध्याएर नेपाल फर्किइन् । ज्योति प्रसूतिगृहमा काम गर्न थालिन् । यहीबीचमा पहिलो बच्चा भयो । जगदीशलाई न्युरोलोजीको फेलोसिप गर्न जापानको अवसर आयो । त्यतिवेला जगदीशको पठाइ अघि बढाउन ज्योतिले प्रसूतिगृहको काम छाडिदिइन् । ४–४ वर्षको अन्तरमा तीन छोराछोरी भए ।
दुवैको करिअर अघि बढाउनु नै थियो । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा परिवारको व्यवस्थापन थियो । के गर्ने त ? ज्योतिमा परिवारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने सोचको प्रचुरता थियो । उनले सुरुमै जगदीशको पठाइका लागि प्रसूतिगृहको काम छाडेकी थिइन् । फेरि अस्पतालमा आबद्ध हँुदा दुवैको व्यस्तताले परिवार बिग्रिन पनि सक्थ्यो । त्यसपछि ज्योति न अस्पताल खोल्नतिर लागिन्, न कुनै अस्पतालमा अबद्ध नै भइन् । उनी बिहान–बेलुकाको समय मात्र क्लिनिकमा बसेर परिवारको व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिन थालिन् । ज्योति अस्पताल गइनन् र जगदीश क्लिनिक गएनन् ।
जगदीशले आफ्नो सम्पूर्ण व्यावसायिक करिअरमा निजी प्राक्टिस गरेनन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उनीसँग पालो कुर्ने ६ महिनासम्मको लामो लिस्ट हुन्छ । जगदीशको ओपिडीमा हप्ताको दुई दिन पालो पर्छ, तर उनी अतिरिक्त एकदिन थप काम गरिदिन्छन् । उनी चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न उपाय निकाल्न अनुसन्धान र अभियानमा लागे । ‘म अस्पतालमा नजोडिनु र उहाँ क्लिनिक नजानुले नै परिवारका लागि समय छुट्याउन पायौँ,’ ज्योति भन्छिन् । जगदीश थप्छन्, ‘घरको काम नगरे पनि म अफिसको कामलाई घर ल्याउँदिनँ, जति समय घर बस्छु, परिवारलाई दिन्छु ।’
अहिले जगदीश घरको काममा पटक्कै ध्यान नदिने रुपमा उनकै शब्दमा ‘बदनाम’ छन् । ज्योति छोराछोरीलाई समय दिने, घर र क्लिनिक चलाएर पनि बचेको समयमा मीठा परिकार पकाउनेदेखि घरको सिँगार–पटारमा समेत उत्तिकै ध्यान दिन्छिन् । घरको नियमित कामका लागि भने सहयोगी छन् । ज्योतिलाई आफ्नो सिँगार–पटारमा भने कहिल्यै इच्छा जागेन ।
एउटै पेसा अँगाल्दाको सबैभन्दा ठूलो फाइदा, उनीहरुले एकअर्काका समस्या र व्यस्ततालाई राम्ररी बुझ्न सकेका छन्, एकअर्काका अप्ठ्यारामा सहयोग पु¥याउन पाएका छन् । ‘कुनै प्रसूतिरोगकी बिरामीलाई फिजिसियनको परामर्श चाहिएमा फोनबाटै जगदीशसँग समस्या भन्छु, त्यसले गर्दा अर्को ठाउँमा रेफर गरेर दुःख दिनुपर्दैन,’ ज्योति भन्छिन् । जगदीश पनि आफ्ना प्यासेन्टलाई प्रसूतिसम्बन्धी परामर्श चाहिएमा ज्योतिसँग फोनबाट हुनेसम्म सोधेर सहयोग लिन्छन् । ‘डाक्टरका रुपमा आममान्छेलाई गर्न सकिने सेवा र सामाजिक प्रतिष्ठाले गर्दा किन दुवैजना डाक्टर भइएछ भन्ने कहिल्यै लागेन,’ ज्योति भन्छिन् ।
ज्योति अहिले पनि घरभित्र बच्चालाई सघाउनेदेखि साना कुराको व्यवस्थापन पनि गर्छिन् । ज्योतिको कर क्लियरेन्सदेखि आर्थिक पक्षलगायत बाहिरी व्यवस्थापनका काम जगदीशको भएको छ । छोराछोरीको विद्यालयको शुल्क बुझाउन जाने, रिपोर्ट कार्ड लिन जाने, कहिलेकाहीँ पर्दा स्कुल–कलेज पु¥याउने काममा पनि जगदीश सघाउँछन् ।
ज्योतिले डाक्टर बनिसकेपछि आफ्नै इच्छाले पाकशिक्षाको तालिम लिएकी छिन् । जगदीशको खाने मामिलामा ‘फिक्स’जस्तै छ । जस्तोसुकै पार्टीमा गए पनि उनी अधिकांश समय ‘मेन प्लेट’ नसमातीकनै घर फर्किन्छन् । लुगामा सौख छैन । लुगा सिलाउन पनि ज्योतिले नै जबर्जस्ती गरेर लानुपर्छ । उनले सधैँ लगाउने भनेको निलो वा खैरो पाइन्छ र सेतो सर्ट हो । ‘नाप्नुनपर्ने हो भने जुत्ता पनि मैले नै ल्याइदिनुपथ्र्यो होला,’ ज्योतिले भनिन् ।
घरपरिवारमा व्यक्तिगत स्वभाव, चाहना र इच्छामा फरक पर्दा ठाकठुक त परिहाल्छ । यस्तोमा ज्योति भन्छिन् र मन हलुंगो पार्छिन् । जगदीश सुनिदिन्छन्, प्रतिक्रिया दिँदैनन् ।
ज्योति सुरुका दिनमा खानाको सौखिन हुन् । तर, जगदीशले बाहिर नखाने भएपछि अहिले उनको समेत बाध्यता बनेको छ । सिनेमा हेर्ने, हाइकिङ, सांस्कृतिक र सांगीतिक कार्यक्रममा उनको सौख छ । बल्ल–बल्ल उनले जगदीशलाई नयाँ सिनेमा आएको समयमा बुधबार एक दिन हेर्न जाने बानी पारेकी छिन् । प्रत्येक वर्ष दसैं बिदामा उनीहरु नबिराई सपरिवार नेपाल, भारत र वा अन्य देशको यात्रामा निस्किन्छन् । ‘उनी अस्पतालमा नहुनु र मैले निजी प्राक्टिस नगर्नुले धेरै सहज बनाएको छ,’ डा. जगदीश भन्छन्, ‘निजी अस्पताल चलाएको भए २४ घण्टै ड्युटीले ह्याटिक हुन्थ्यो ।’
घरपरिवारमा व्यक्तिगत स्वभाव, चाहना र इच्छामा फरक पर्दा ठाकठुक त परिहाल्छ । यस्तोमा ज्योति भन्छिन् र मन हलुंगो पार्छिन् । जगदीश सुनिदिन्छन्, प्रतिक्रिया दिँदैनन् । ‘मैले परिवारलाई कम समय दिएँ भन्ने गुनासो भइरहन्छ । तर, मैले जानी–जानी समय नदिने हैन, उनले पनि बुझेकै हुन्छिन्, र पनि भन्नुपर्छ ।’
स्वभावले ज्योति केही महत्वाकांक्षी छिन् भन्ने लाग्छ जगदीशलाई । ‘महत्वाकांक्षाभन्दा पनि प्रोग्रेस गर्न मलाई मन लाग्छ, उहाँ जे छ ठिक छ भन्ने मान्छे,’ ज्योतिले थपिन् । तर, दुवैलाई लोभ र अतिरिक्त मिहिनेतविनाको पैसाको पछाडि लागौँ भन्ने छैन । चिकित्सा पेसामा लालच राख्ने, बिरामीलाई अनावश्यक भारमा पारेर अतिरिक्त कमाउने चिकित्सक उनीहरुले नदेखेका होइनन् । इथिकल प्राक्टिस दुवैका आदर्श हुन् । दुवैको अघोषित सहकार्य यसमा पनि छ ।
दाम्पत्य जीवनको कसिलो बन्धन त्यतिवेला खुकुलो हुन्छ, जब सम्बन्धमा शंका–उपशंका उब्जिन्छ । ‘मन नपरेका कुरा तत्काल भनिएन र मनमा राखिरह्यो भने टेन्सन बढ्छ,’ ज्योति भन्छिन्, ‘एकअर्काको स्वभाव र भावनाअनुरुपको रेस्पेक्ट गरेर राम्रो सम्बन्ध सम्भव छ ।’ ज्योतिलाई लाग्छ– परिवारलाई समय नै दिन नसक्ने मान्छेले विवाह नै नगरे हुन्छ । ‘व्यावसायिक जीवनमा आफ्नो प्रगति हेरेर मात्रै हुन्न, पहिलो प्राथमिकता परिवार हुनुपर्छ,’ ज्योति थप्छिन्, ‘श्रीमान्का कारण श्रीमती र श्रीमतीका कारण श्रीमान्ले सफर गर्छ र दुवैका कारण पूरै परिवारले सफर गर्छ ।’